Fanaanka Caanka Ah Jay-Z Oo La Saxiixday Marcus Rashford & Qorshaha Uu Ka Damacsan Yahay Oo La Ogaaday | Laacibnet.net
Fanaanka Caanka Ah Jay-Z Oo La Saxiixday Marcus Rashford & Qorshaha Uu Ka Damacsan Yahay Oo La Ogaaday
Kaliya ma aheyn taageerayaasha, dadka caanka ah iyo Ra’isal wasaaraha Ingariiska Boris Johnson ayaa ka mid ahaa dadkii Marcus Rashford uga mahadceliyay olihiisii cuntada bilaashka ah lagu siiyay caruurta iskuulada ee dalka Britain, laakiin fanaanka caanka ah Jay-Z ayaa sidoo kale la dhacay.
Jay-Z oo ah bilyaneer ka taajiray muusiga ayaa haatan noqday maamulaha 22 jirkaan ka dib markii uu dhowr bilood la taliye u ahaa Rashford kaasoo ku qasbay dowlada Ingariiska inay ka laabato go’aankeedii hore ee ahaa inay xagaagan cuntadii bilaashka aheyd ka joojiso caruurta iskuulada.
Shirkada Roc Nation ee ku fadhisa 75 milyan ginni ee uu aas-aasay Jay-Z ayaa ku dhawaaqday isbuucii la soo dhaafay inay la saxiixatay xiddiga da’da yar ee England.
Laakiin bilyaneerkaan dan kama lahan waayaha ciyaareed ee Marcus Rashford.
Waxa uu si weyn u xiiseynayaa inuu ka dhigo ololeeye ka muuqda masraxa caalamka oo u dooda xuquuqda dadka madow iyo dadka laga tirada badan yahay.
Jay-Z ayaa si fiican u la dhaqmay Marcus Rashford ka hor intii aan la gelin karantiilka isagoo u kaxeeyay magaalada Miami bishii Febraayo si ay u daawadaan ciyaarta kubada Mareykanka ee Super Bowl.
Marcus Rashford ayaa hore u kaxeystay wiilasha la dhashay ee Dwaine Maynard iyo Dane Rashford kuwaasoo hagayay waayihiisa kubada cagta iyagoo leh shirkad maamul oo la yiraahdo DN May Sports Management.
Intii ay Miami joogeen walaalihiis waxay la kulmeen shaqsiyaadka caanka ah ee ay shirkada Roc Nation wakiilka ka tahay sida fanaanada Shakira iyo majaajiliistaha Kevin Hart.
Jay-Z ayaa markaas ku soo jiitay Marcus Rashford gargaarka bani’aadanimo ee ay shirkadiisa qabato.
Jay-Z oo soo saare ka ahaa bandhigii waqtiga nasashada ee ciyaartii Super Bowl ayaa ka dhaadhiciyay xiriirka NFL inay 100 milyan doolar ku bixiyaan 10ka sannadood ee soo socda ololayaasha lagu dalbanayo sinaanta bulshada.
Haatan Roc Nation waxay xaqiijisay inay la saxiixdeen Marcus Rashford laakiin walaalihiis ayaa weli sii maamuli doonaa waayihiisa kubada cagta halka shirkada Jay-Z ay maamuli doonto wax walba oo ka baxsan garoonka.